जिन्स पाइन्टमा किन हुन्छ ठूलो सँगै सानो गोजी ? दैनिक जिवनका ४ रोचक तथ्य र वास्तविकता « Sajha Page
जिन्स पाइन्टमा किन हुन्छ ठूलो सँगै सानो गोजी ? दैनिक जिवनका ४ रोचक तथ्य र वास्तविकता
हाम्रो जिवनमा केही यस्ता कुराहरु हुन्छन् जसलाई हामी हरेक दिन देखे भोगको हुन्छौँ तर त्यस्तो कुरा तथा घटना हुनु पछाडिको कारण कहिल्यैपनि जानेका हुँदैनौँ र जान्ने कोसिस पनि गर्दैनौँ । हाम्रो दैनिक जिवन सँग सम्बन्धित केही रहस्य तथा तथ्य र त्यसमा लुकेको गुह्य वास्तविकता यस्ता छन्ः
जिन्स पाइटको अगाडि पटि्टको गोजी माथि एउटा सानो गोजी हुन्छ र उक्त गोजीको दुबैपटि्ट बटन पनि हुन्छन् । यस्ता साना पकेट सिक्का राख्नका लागि होला भन्ने ठान्छौँ हामी । तर होइन । वास्तवमा १९ औँ सताब्दीमा गाइ गोठाला अर्थात् काउब्वाइज र सुनखानीमा काम गर्ने कामदारको घडी पकेट वाच राख्नका लागि यस्तो सानो गोजीको डिजाइन गरिएको हो । पहिले जिन्स पाइन्ट धेरैजसो श्रमिकहरुले लगाउँथे । कामदारहरुले काम गर्दा जिन्स पाइन्टको गोजी च्यातिने समस्या धेरै हुन्थ्यो । त्यसैले पाइन्टका गोजीलाई मजबूत बनाउनका लागि गोजीको दुबै कुनामा बटन हाल्ने चलन चलेको हो ।
कपडाको जुत्तामा किन राखिन्छ अतिरिक्त प्वाल ?: कहिलेकाहीँ तपाइँलाई पनि अचम्म लाग्दो हो आखिर किन कुनै जुत्तामा साइडमा अतिरिक्त प्वाल राखिएको हुन्छ ? ती प्वाल कुनै तुना छिराउनका लागि बनाइएको होइन । जुत्तामा हावाको भेन्टिलेसनका लागि अतिरिक्त प्वाल बनाइएको हो । जसका कारण जुत्ताभित्रको खुट्टासम्मै हावा छिर्दछ ।
कि बोर्डमा एफ र जे अक्षरको की मा किन सानो लाइन हुन्छ ?: टाइप गर्ने बेला दुबै हातका गरी १० वटा औँला राखिने की हरु मध्ये एफ र जे अक्षरको की मा चोर औँला पर्दछन् । त्यसैले कि बोर्ड नहेरीकन टाइप गर्दा समेत औँलाहरु सही की मा परुन् भन्नका लागि एफ र जे की मा केही उठेको सानो लाइन राखिएको हुन्छ ।
प्रचण्डको उत्ताउलोपन,माधव नेपालको गुटबन्दी र बामदेब गौतमको पाखुरा सुर्काईले केपी ओली सरकार असफल भएको हो : आनन्दराम पौडेल
रबिन्द्रको लास जलाउँदा मन थाम्नै सकिएन, श्रीमती र छोराहरुले दिए दागबत्ति (भिडियो)
भक्तपुर सल्लाघारीको 'सत्य शक्ती माता'ले यसरी सोझासाझाको करोडौ लुटी रहेको छ, मुर्ख जनताहरु उनलाई भेट्न १,२०० देखि १ लाख ५० हजार रुपैया सम्म प्रवेश शुल्क तिर्छन (भिडियो प्रमाण सहित)
फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गको अत्यन्तै जरुरी सन्देश - फेसबुक प्रोफाइलबाट यी ११ कुराहरु हटाइहाल्नुस, नत्र पछुताउनु पर्ला !
पोखरा एयरपोर्ट देखी रामघाट सम्म रबिन्द्रको यो भिडियो हेर्नुहोस् पल–पल रुवाउनेछ
मगर जातिको चाँड होइन दशैँ-एक पटक पढ्नै पर्ने लेख……!
मान्छेको मृत्युपछि के हुन्छ ? पुनर्जन्मबारे विज्ञानले यसो भन्छ
यौन जिज्ञाशा: यौनांग कसरी टाइट बनाउन सकिन्छ ?
सँसारकै सबैभन्दा राम्रो अक्षर लेख्न सक्ने नेपालकी शान प्रकृति मल्ल (भिडियो सहित)